Mira Kunyorera Kweinjini dzekutsvaga Martech Zone
Mira Kunyorera Kweinjini dzekutsvaga
Chitatu, Kurume 21, 2007 Chipiri, Gunyana 4, 2011 Douglas Karr
Yangu WordPress template inogadzirisirwa Kutsvaga Engines. Ini ndakanyatso rongedza template yangu ndadzidza matipi mashoma kubva kuvanhu vashoma. Zvese zvinhu kubva pamazita emapeji kusvika kumateki zvakavezwa kuti zvinyorwe sezvandinogona kubva mazviri.
Kugadziridza yangu blog template inoshanda - ingangoita 50% yevashanyi vangu vanouya nenzira dzeKutsvaga Engines, kunyanya Google. Kunyangwe yangu blog yakagadziridzwa yeKutsvaga Engines, SEO nyanzvi dzichaona kuti zvandatumira hazvisi.
Handidzokorore musoro wenyaya wangu mumitsara yangu yekutanga. Ini handishandisi toni yezvinongedzo mune zvandatumira. Ini handiwanzo kubatanidza nezvangu zvinyorwa kunze kwekunge zviri zvechokwadi hama. Ndaverenga tani ye SEO zvinyorwa, ndinogona kunyora mucherechedzo wezvinhu izvo ini fanira ita nechimwe chinyorwa.
Ini handichazviita nekuti ini handisi kunyorera Tsvaga Engines, ndiri kunyorera vaverengi. Zvinongoita senge zvekunyepedzera kushandura maitiro eangu dialog kuitira kuti imwe software yekushandisa pane imwe webhu inokambaira inogona kukwevera ruzivo rwangu uye kunongedza zvinyorwa zvangu zvekutsvaga mazwi akakosha. Handina basa kana injini yekutsvaga ikandiwana zviri nyore… Ini ndine hanya kuti muverengi anofarira zvinyorwa zvangu zveblog.
Sezvo ndanga ndichiverenga izvo zvinyorwa kwechinguva, ndinogona kunyatsoona kana mamwe mabloggi ari kuzviita. Ingori izwi reyambiro kune avo mabloggi - ini svetuka kuverenga yakawanda yemapositi ako nekuda kwayo. Pane imwe nguva, ini ndinotomira kunyorera.
Imwe nzira yekuudza aya mabloggi ndeyevatsinhiri vavo ... unowanzoona vakasiyana vatauri vhiki rega rega iwe kuenda kune yavo blog. Hapana hurukuro… chingori chirevo pano neapo uye vaverengi havadzoke. Ini ndinonakidzwa chaizvo nekuona vanhu vamwechete vodzokera kublog rangu kasingaperi. Ndakura kuva shamwari nevazhinji vevashanyi vangu - kunyangwe ini ndisina kumbosangana navo.
Vaya vane nhepfenyuro yakanangana nekutengesa vanoziva kuti kutsvagisa pane chero svikiro kunokuudza kuti zvinonetsa kuwana vaverengi vatsva pane kuchengeta zviripo. Iri zano rekuzvikunda kana iwe uchinyora kuvaka Injini Yekuisa kuiswa asi vaverengi vako havafarire kana kunamatira neako blog. Iwe unofanirwa kuramba uchigadzirisa uye uchiramba uchiita tweaking kuti uwane mamwe mahwina kubva kuNjini dzekutsvaga.
Usanyore kutsvaga maInjini. Nyora kuitira vaverengi vako.
Kuba Bait kubva kuVaredzi
Mar 22, 2007 pa 1: 02 AM
ndatenda nesalt cheki 🙂
dzimwe nguva mukuvavarira kwedu kupinda muzvikoro tinoita kunge tinokanganwa kuti kune chaiko vaverengi kunze uko.
Mar 24, 2007 pa 9: 08 PM
Ini handiwanzo batanidza nezvangu zvinyorwa kunze kwekunge zviri zvechokwadi hama.
Ini ndoda kumbobatanidza kune zvangu zvinyorwa. Ndiko nekuti kazhinji yenguva, zvandatumira zvinoita kunge zvisingateedzane. Ivo vanowanzo kungori pamusoro wenyaya wenguva iyoyo, vasina hukama (kana zvishoma, kana zviripo) kune zvakapfuura zvinyorwa.
Apr 2, 2007 pa 3: 25 PM
Ini ndakatanga bhurogu uye ndakafunga kuti ndaizoita icho chaizvo chinhu, nyora kuti uwane mapeji emapeji uye nezvimwe, ipapo pandakatanga kunyora, zvaiita senge ndisiri ini ... Nekuti zvaive zvisiri! Ini ndakabva ndati kana ndaizozviita it was gonna be on my terms and no others. Ini ndanga ndichingo blogga kwemwedzi uye ini ndoda chokwadi chekuti ndiri kuvaka hukama uye kwete zvinongedzo!
Apr 2, 2007 pa 4: 37 PM
Ndatenda, Latimer! Ini ndanga ndichangopfuura pa blog yako (ndinofunga tine shamwari yakafanana - JD kubva Nhema MuBhizinesi. Yako blog yakanyorwa zvakanyatsofungisisa… unobata pamisoro yakati wandei inoputika misoro, asi iwe neruremekedzo unopa divi rako rekupokana uye wosiya iwo musoro wakavhurika kuti ukurukurwe.
Ndakaverenga akawanda ezvinyorwa pane blogosphere nezve izvo iwe fanira be ndichiita ... uye ini chokwadi ndinofunga yakawanda yacho BS Zvakawanda sekuudza mumwe munhu kuti sei fanira ita hurukuro nemunhu wausingazive.
Kutenda nekumira uye kupindura!
Apr 2, 2007 pa 5: 11 PM
Kutenda nekumira naDoug, sekutaura kwangu pa blog yangu ndinogara ndakavhurika kuti ndinzwe pfungwa dzese uye tinogona kuita hurukuro dzakangwara pamusoro penyaya ipi. Zvakare zvakare ndatenda nekupindura.
Apr 3, 2007 pa 3: 29 PM
Ini ndanga ndichida kukuzivisa iwe kuti ndanyatsonakidzwa nezvawataura mune ino posvo. Ini ndichangotanga blog rangu kweinopfuura mwedzi wapfuura uye ndakadzikama kudzidza maitiro ekuita chinhu ichi, saka zano rako rinobatsira chaizvo nekuti rinotaura chokwadi. Kunyangwe hazvo ndanga ndisiri pane ino miniti, ini ndaifanira kurwisa muyedzo wekuita CHINHU chekupaza iyo kuverenga. Zvakafanana nekutsemuka kupenga kana chimwe chinhu, iwe unoziva? ZVAKAWANDA vaverengi, ini ndinongo fanirwa kuve neAKAWANDA VAVERENGI.
Asi ikozvino ndakaverenga tsamba yako uye zvese zvinodzoka kwandiri, senge riya izwi diki rakabatwa rakatapwa kumashure kwepfungwa dzangu. Uyo akarangwa nekuita zvine musoro. "Taura zvaunoziva, utaure sekutaura kwako, uye vanouya."
Ndikukumbira ruregerero, hongu, ku "Munda weDoto".
Apr 3, 2007 pa 5: 08 PM
Ndatenda, Keith. Ini ndinofunga munhu wese (kunyangwe kunze kwekublogi) anotsvaga kuzivikanwa. Ini ndinozviwanawo ndichinyora dzimwe nguva ndichifunga kuti zvinokanganisa sei SEO yangu, zvinongedzo, diggs, nezvimwewo Chimwe chezvikonzero chandakanyora iyi posvo kwaive kuchengeta pachangu mumutsara zvakare!
Apr 3, 2007 pa 5: 53 PM
Zvakanaka kutumira. Ini ndinoedza kusanyorera kutsvaga injini, asi ndinofanira kubvuma kuti ndinofunga nezvazvo. Mune mamwe emazita ezvangu zvinyorwa (kana zvine chekuita nechiitiko chikuru), ini izwi nderekuti rinogona kutorwa nemainjini ekutsvaga. Ini handiite izvi kuti ndive nenhamba yepamusoro yevashanyi kunzvimbo iyi (ndine dzimwe nzira dzekudyisa ego yangu). Ndinozviita nekuti ndinoda kuti vanhu vaverenge zvandichataura. Ndinovimba vachadzoka uye votora chikamu munhaurirano. Kubloga kunonakidza. Ini ndinosangana nevamwe vanhu vakuru uye ndodzidza zvakawanda mukuita.
Apr 3, 2007 pa 9: 40 PM
Uchitende kana kwete, unogona kunyora zvinotsvaga uye vaverengi vako.
Ini ndinoda kufunga zvese / uye panzvimbo peimwe / kana.
Apr 3, 2007 pa 9: 59 PM
Chero mukana wekuti ndinogona kukupikisa kuti upe kuratidzwa kwakadai? Ini handipokane kuti hazvigoneke - ndinofunga pane dzimwe nzira dzekuita zvese zviri zviviri. Nekudaro, ini handikwanise kuona chero mienzaniso. (Zvichida imhaka yekuti munyori akaita basa rakanakisa rekushandisa matekinoroji ese.)
Ini ndingafarire kuona yakasarudzika posvo iyo yakanyorwa mushe uye ndichienzanisa iyo neposvo yakanyorwa mushe Uye inoshandisa matekinoro ekutsvaga maInjini.
Apr 4, 2007 pa 7: 49 AM
Panjodzi yekuridza zvachose kuzvikorokotedza, heino chidimbu chandakagadzira chiri kuwana yakanaka yekutsvaga-injini traffic uye imwe iyo yangu yakajairwa vaverengi.
Kwete-Kugunun'una Mitemo: Uri kuomerera kwavari?
Ndine mashoma akadaro - kuna Mwari chete ngaave nekubwinya!
Kunyangwe ini ndichibvuma ini ndinoziva zvaunoreva - dzimwe nguva ini ndinotsvedza zvakanyanya mukuda SEO kupfuura maverengi angu enguva dzose, asi ndinofara maverengi angu enguva dzose vachiri kuramba vachidzoka nekuti vanondida.
Zvakafanana neni ndinazvo Ilker Yoldas 'TheThinkingBlog.com: Ini ndinongoramba ndichiiverenga nekuti ndinomuda, saka anogona kunyora SEO uye ndingadai ndichiripo semuverengi wake wenguva dzose!
Chenjera uye nekutenda nekupindura,
Apr 4, 2007 pa 10: 10 AM
Ndatenda, Paula. Ndinovimba, iwe unotora izvi nenzira kwayo - asi ndinofunga iwe wakabatsira kutsigira zvandaifunga. Kutaurwa kwako kwe "hapana-kugunun'una rundarira" kanoverengeka mundima dzekutanga hakuratidzi kuti ndeyechokwadi - inoverengwa senge SEO ndiyo yaive yekutanga kwete sekunge iwe waitaura neni.
Iyo posvo yakanaka, ndokumbirawo usanditore nenzira isiri iyo. Asi mumakore mashanu apo injini dzekutsvaga dzinogona kuendesa data remusoro pasina chikonzero chekuvanyorera - iyi ingave nzira yechisikigo yekunyora posvo?
Sezvineiwo, ndakaenda iyi posvo pane Kufunga Blog uye ndima yekutanga ine 21 zvisingabatsiri zvinongedzo mairi zvekubatanidza zvakadzama kune yake blog. Izvo zvinongedzo ndezve kungotsvaga injini dzekutsvaga, kwete zvako neni.
Apr 4, 2007 pa 10: 14 AM
Hapana mhosva yakatorwa; Ndatenda nekuverenga tsamba yangu.
Uye hongu, hongu ini handidi dzokorora uye ushingi hwakakosha mitsara yeSEO dai ndaisada kuti vanhu vavawane.
Maiwe, hwakadai hupenyu hweSEO'er…
Ini ndinoshamisika kuti iyo yese SEO-Google mutambo uchachinja sei mune ramangwana.
Inofanira kuva rwendo runonakidza…
Apr 4, 2007 pa 10: 23 AM
Wee! Kaviri-vhiri! Thanks Paula.
Ndira 23, 2008 na4: 20 PM
Ingoverenga iyi posvo uye nenguva yakadii. Ndakasiya musangano svondo rapfuura uyo mumwe wangu akapindura kune kutaura kuti mawebhusaiti edu haadi kuverengera achiti "aya mapeji haasi evaverengi. Aya mapeji ndeaya enjini dzekutsvaga ”. Zvakandigadzira kukwenya musoro wangu watakange tasvika parizvino munzira yekugadzirisa zvekuti mumwe munhu ANOFANIRA kuti iwo mapeji arege kuverengwa nevanhu. Inovhuvhuta pfungwa dzangu. Gadzirira zvakanyanya sezvaunogona iwe uchigadzira zvine ruzivo zvemukati zvinoita kunge zano rekunze. Pasina mubvunzo kutaura, ini ndakatumira ichi chinyorwa kune vanhu vashoma mukambani yangu.